I-Sweetgrass Cottage - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni enomtsalane nekhanyayo nentsha, ineefestile kuyo yonke indawo ukuze iindwendwe zonwabele ukubuka iindawo. Yindawo yeholide elungele abantu abalala bodwa okanye abathandanayo abafuna ukubuka iAiken SC neendawo ezikufutshane. Indlu esemaphandleni i-Tree Runs Plant, i-Aikens Premier Equestrian Community, indlu esemaphandleni eyi-Sweetgrass iphakathi kwemizuzu eyi- kwiindawo ezininzi ezilinganayo nokuba kufutshane ne-Augusta GA, ikhaya lokhuphiswano lwegalufa lwe-Masters. Zipholele kwiveranda engaphambili okanye uchithe iintsuku zakho uhlola isithili esinembali eAiken.
I-Sweetgrass Cottage intsha, icocekile, ivulekile ibe isilingi ephezulu kunye neefestile ezininzi ukuze ukonwabele ukubona amadlelo nemithi kunye nehashe okanye abantu ababini abahambahambayo. Yiza wonwabele le ndawo incinci yezulu.
4.99 · Izimvo eziyi-101
I-Sweetgrass Cottage ikwintsapho yamahashe kwaye eyona nto ndiyifumana rhoqo kukuba ipholile kangakanani apha. Singqongwe yindalo, iingoma zeentaka nobuhle. Yiza uyonwabele!
Iindwendwe kufuneka zizive zikhululekile ukunxibelelana nam ngomyalezo, i-imeyile, okanye zize kunkqonkqoza ngasemva. Ndiyakuvuyela ukuphendula nayiphi na imibuzo kunye nayo yonke imibuzo kwaye ndiza kuhlonipha izinto zakho eziyimfihlo ngoxa ulundwendwe eSweetgrass Cottage
Iindwendwe kufuneka zizive zikhululekile ukunxibelelana nam ngomyalezo, i-imeyile, okanye zize kunkqonkqoza ngasemva. Ndiyakuvuyela ukuphendula nayiphi na imibuzo kunye nayo yonk…